Unxibelelwano lweXesha langempela: Yintoni iWebRTC? | Martech Zone
Unxibelelwano lwexesha lokwenyani luyatshintsha ukuba iinkampani zibusebenzisa njani ubukho bazo kwiwebhu ukuze zisebenze ngokufanelekileyo kunye nethemba kunye nabathengi.
Unxibelelwano lweWebhu-yeXesha leXesha leWebhu (WebRTC) yingqokelela yeenkqubo zonxibelelwano kunye nee-API eziphuhliswe kwasekuqaleni nguGoogle ezenza ukuba ixesha lokwenyani nelizwi levidiyo linxibelelane noontanga. IWebRTC ivumela izikhangeli zewebhu ukuba zicele ulwazi lwexesha lokwenyani kwizikhangeli zabanye abasebenzisi, ezenza ukuba ixesha lokwenyani lontanga kunye nonxibelelwano lwamaqela kubandakanya ilizwi, ividiyo, ingxoxo, ukuhanjiswa kwefayile kunye nokwabelana kwescreen.
Twilio Yintoni iWebRTC?
IWebRTC ikuyo yonke indawo.
Intengiso yeWebRTC yehlabathi yayiyi- $ 1.669 yezigidigidi zeedola kwi-2018 kwaye kulindeleke ukuba ifike kwi-21.023 yezigidigidi zeedola kwihlabathi jikelele nge-2025.
Uphando lweNtengiso yeZiyon
Kwiminyaka eyadlulayo, iWebRTC yaqala njengomboneleli weVoIP protocol ojolise kwizikhangeli zewebhu. Namhlanje, akukho sikhangeli sisasaza iaudiyo / ividiyo ngaphandle kokuphunyezwa kweWebRTC. Ngelixa kukho abanye abathengisi abakholelwa ukuba iWebRTC isilele ukufikelela kulindelo lwabo, mhlawumbi ngabathengisi abangaphumelelanga ukusebenzisa iWebRTC ukuphakamisa amava omsebenzisi aphezulu.
IWebRTC imalunga nokwandisa iincoko zexesha lokwenyani ngebrawuza yewebhu. Kutshanje, uGoogle utyhile i-Chrome ibambe ngaphezulu kwe-1.5 yezigidigidi zeaudiyo / ividiyo yevidiyo ngemizuzu. Kulungile Imizuzu engama-214 yezigidi ngosuku. Kwaye ikwi-Chrome nje! Nantsi inkangeleko eneenkcukacha yamandla afunyenwe kusetyenziswa iWebRTC.
Luluphi unxibelelwano lweXesha leXesha olufumanekayo ngeWebRTC?
Ukwabelana ngesikrini -Fumana okuninzi kwintsebenziswano nabanye abasebenzisi kwangoko. Ingxoxo yeWebRTC 'Android / iOS yengxoxo yevidiyo yenza ukuba kwabelwane ngescreen ukude nesinye isixhobo okanye umsebenzisi onokufikelela okufanelekileyo. Ngokutyikitywa kweWebRTC, ukusebenzisana okukude kwale mihla kuyasekwa ngababini baboneleli beqonga lonxibelelwano abaphambili skype& Isibuko. Ukwabelana kwescreen kuyiphucula yonke intsebenziswano yeshishini kwinqanaba elilandelayo apho inkomfa esekwe entlanganisweni yeyona misebenzi yayo ibalulekileyo. Ukusuka kwiingxoxo ukuya kwinkcazo-ntetho, ii-webinars ukuya ezintlanganisweni, ukwabelana ngescreen kuyeyona nto iphambili.
Ingqungquthela yevidiyo yabasebenzisi abaninzi -Inkomfa yevidiyo yabasebenzisi abaninzi ebalaseleyo ifuna ukusasazeka kakhulu ukuphatha iitoni zabasebenzisi ngaxeshanye, kulapho ingxoxo yewebhu yeWebRTC ingena khona. I-WebRTC isayina iseva ivumela ukwenza ixesha lokwenyani kunye nokuhambisa ividiyo yamaqela amaninzi kunye neefowuni zezwi kwihlabathi liphela. Ividiyo yeWebRTC kunye nokufowuna ngelizwi kufuna isixa esincinci semithombo yeendaba ukudibanisa bonke abathathi-nxaxheba kwifowuni yeqela elinamaqela. I-WebRTC yevidiyo yokufowuna isikali inyusa uqhagamshelo lwamaqela amaninzi kwii-MCUs (iiyunithi zolawulo lweMultipoint) kunye nee-SFUs (iiyunithi zokudlulisa ezikhethiweyo).
Ukusebenzisana ngokulula -Ezo ntsuku xa wawusayinela ukungena kwiakhawunti, khuphela iqonga kwaye ufake amaqonga aliqela ukunxibelelana nomnye umntu ukwenza incoko. Ngeseva yengxoxo yelizwi kunye nevidiyo yeWebRTC, akusekho nkqubo zesiko. Incoko yokubhaliweyo yeWebRTC yenza ukuba kube lula ngakumbi kwaye kube lula ukufumana ukusebenzisana ngaphandle komthungo. Ukusebenzisana okwenyani kwenziwa ngokulula kumaqonga asekwe ngeWebRTC ezixhaswayo.
Ukwabelana ngeFayile Ukuhanjiswa kwedatha enkulu bekusoloko kuyinto ebukhali nenzima apho oku kukhokelela kubasebenzisi ukuba batshintshele kwezinye iinkqubo ezinje nge-imeyile okanye ukuqhuba. Inkqubo yokuhambisa idatha ayilula kangako, ichithe ixesha elininzi, umgudu kunye nedatha. Ngeseva yokusayina yeWebRTC, iyayicutha inkqubo ngokuvumela ukuba iyithumele ngqo kwiwebhusayithi ebethelelwe nayo umnxeba wevidiyo API. Kwaye ukuqhubela phambili, iWebRTC ivumela ukuhambisa iifayile kwi-ultra-low latency nantoni na i-bandwidth. Ngaphezulu kwayo, iWebRTC ihambisa idatha phantsi kophahla olunye olukhuselekileyo.
Ukhuseleko lweVidiyo kunye noNxibelelwano ngeLizwi -IWebRTC etyikitya iiWebSocket zibonelela ngomgaqo olomeleleyo we-RTP (i-SRTP) ebethela yonke ingxoxo yelizwi yeqela leWebRTC edluliselwe kwi-Android, iOS kunye neeapps zewebhu. Kwakhona, ivelisa ukungqinisisa konxibelelwano ngaphezulu kweWifi ukukhusela umnxeba kufikelelo olungafunekiyo kunye nokurekhodwa kweefowuni.
Iinkonzo zexesha lokwenyani zoNxibelelwano oluBukhoma -I-WebRTC inokubanakho ukudibanisa kunye nasiphi na isicelo sokufumana incoko ephilayo kuwo onke amacandelo. Isiseko seWebRTC kunye nengxoxo yevidiyo ye-SDK yenza indlela ethe ngqo yokwenza incoko ebukhoma nokuba yeyiphi na ishishini, kwintengiso, i-ecommerce, ukhathalelo lwempilo, inkxaso yabathengi, ibonelela ngeenkonzo zonxibelelwano zexesha lokwenyani.
Ukubambezeleka kwenethiwekhi ephantsi -Ifowuni yeVidiyo ye-API ngokudityaniswa kweWebRTC yenza ukuba yabelane ngedatha ngokuthe ngqo kwisixhobo okanye usetyenziso ngaphandle kokungena kuthotho lweeseva. Unxibelelwano lwebrawuza olulawula ukuhamba kwedatha kunye nezibonelelo zokuhambisa kuthungelwano olusezantsi. IWebRTC inika amava esicelo sokuxoxa ngokuhamba okukhulu kwemiyalezo kunye neefayile kolunye usetyenziso ngaphandle kokujonga umda webhendi kwiwebhusayithi.
Ifowuni yeWebRTC yeVidiyo isebenzisa iiNode
Dibanisa iWebRTC usebenzisa iMirrorFly
Ngaba ufuna ukuqala namhlanje? Jonga ixesha lokwenene leMirrorFly Incoko ye-API. Nge-Chat API yabo, ungakha ukwakha ii -apps zemiyalezo ngeendlela ezahlukeneyo usebenzisa izinto ezahlukeneyo kunye nokusebenza. Banikezela nge-API yexesha lokwenyani yezicelo zewebhu kunye ne-SDK yesicelo se-Android kunye nesiselfowuni.
tags: Google +Ixesha elilungilertcUkwabelana ngemifanekisosdknkomfa yevidiyowebrtc
Inokwenzeka: Iqonga lokuThengisa uKhula ngeSitrato